10/27/13 ~ Myanmar Forward
နောက်ဆုံးပေါ် တော်ပီဒိုနှင့် HONGQI-16 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးကျည်တို့အား တရုတ်နိုင်ငံ စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်
Posted by drmyochit Sunday, October 27, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
တရုတ်နိုင်ငံသည် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများနှင့် ရေဒါဖြင့် ဖမ်းယူရရှိသည့် ပစ်မှတ်မျိုးစုံတို့အား ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိသော နောက်ဆုံးပေါ် တော်ပီဒိုနှင့် Hongqi-16 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးကျည် တို့ကို စမ်းသပ် ပစ်လွှတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက် အင်တာနက် သတင်းတစ်ရပ် အရ သိရသည်။ အဆိုပါ နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့သော တော်ပီဒိုအား ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စင်းမှ ပစ်လွှတ် ခဲ့ပြီး ကြားဖြတ်တိုက် ခိုက်မှုကို ရှောင်ကွင်း၍ ပစ်မှတ်အား ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းသည် အခြားအသံ ထက် မြန်နှုန်းနိမ့် သင်္ဘောဖျက်ဒုံးများနှင့် ၅၃ ဒသမ ၅ စင်တီမီတာ အချင်းရှိ တော်ပီဒိုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အရှိန်နှုန်းမြန်ပြီး တိုက်ရိုက်ပေါက် ကွဲစေသော နည်းပညာသစ်အား အသုံးပြုထား သောကြောင့် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများနှင့် ကမ်းတက်တိုက်ခိုက်ရေး သင်္ဘောကဲ့သို့သော အကြီးစား သင်္ဘောများအား ခြိမ်းခြောက်နိုင် စွမ်းရှိကြောင်းနှင့် ၎င်းတွင်အသုံး ပြုထားသော လမ်းကြောင်းရှာ နည်းပညာ ဖျက်ဆီးခံရသည့်တိုင် မျက်ခြည်ပြတ်သွားသော ပစ်မှတ် တစ်ခုအား အကြိမ်ကြိမ်ရှာဖွေနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Hongqi-16 ဒုံးကျည်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တတိယမျိုးဆက် ဖြစ်သော တာလတ်ပစ်မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စနစ်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ MK-41 ဒုံးကျည်ကဲ့သို့ ဒေါင်လိုက် ပစ်လွှတ်သော စနစ်ကို အသုံးပြုထားကြောင်း၊ လေယာဉ် နှင့် ရဟတ်ယာဉ်များအား တိုက်ခိုက်နိုင်ပြီး သင်္ဘောဖျက်ဒုံးများ၊ ခရုဇ်ဒုံးကျည်များ၊ နည်းဗျူဟာ မြောက် ဝေဟင်မှပစ်လွှတ်ရသော ဒုံးကျည်စနစ်များနှင့် ပဲ့ထိန်း ဒုံးကျည်များကို ကြားဖြတ် တိုက်ခိုက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် အချစ်က (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း အရေးကြီးတယ် ဆိုတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး
Posted by drmyochit Sunday, October 27, 2013, under အနုပညာ | No comments
ဒီတစ်ပတ် ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စကားပြောဖို့ ရည်ရွယ်ထားသူက အောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီး တစ်ဦး နေရာကို ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ါဆိုမိုးဦးဆီမှာ ဘယ်လို ခံစားချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့လည်း စီးမျောလိုက်ပါ ထိတွေ့ကြည့်လိုက်ရအောင်လား.....................
မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုကို ခံစားဖူးတယ်
မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ၀ါဆိုခံစားဖူးတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက တွေ့ပြီးတော့ သဘောကျသွားတယ်။ မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ရှိတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကိုယ်က မိန်းကလေးဆိုတော့ သူ့ကို ဘာပြောရမှာလဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေတာမျိုးပေါ့နော်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စိတ်ကစားတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ အဲဒီလို စိတ်မျိုး ဖြစ်တယ်။
အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ဘယ်တော့မှ တည်မြဲမှာ မဟုတ်ဘူး
အိမ်ထောင်မှု တည်ထောင်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်။ အချစ်ရေးကို သေချာခိုင်မာစွာ ဆောက်တည်ပြီးမှ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ ရျိပြီးတော့ ခိုင်မာတဲ့အချစ် တစ်ခုဖြစ်မှ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အိမ်ထောင် တစ်ခုကို တည်ထောင် သင့်တယ်လို့ ၀ါဆိုက ထင်တယ်။ ၀ါ့ဆိုအထင် အချစ်မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ဘယ်တော့မှ တည်မြဲမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်အပေါ်နားလည်တဲ့သူမျိုးကိုပဲ အိမ်ထောင်ဘက် အဖြစ်ရွေးမယ်
သူ့အပေါ်မှာလည်း ကိုယ်နားလည်ရမယ်။ ကိုယ့်အပေါ်လည်း သူနားလည်ရမယ်။ ကိုယ်နဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သစ္စာရှိပြီးတော့ ချစ်နေတဲ့ သူမျိုးက ၀ါဆို အိမ်ထောင်ဘက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ နောက်ပြီး ၀ါဆို့အိမ်ထောင်ဘက်က ယောင်္ကျားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာ မားမားမက်မက်ရပ်တည်ပြီးတော့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့် လူတစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီလို ယောင်္ကျားကောင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ ၀ါဆို့အိမ်ထောင်ဘက် အဖြစ် ရွေးချယ်ဖြစ်မှာပါ။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် အချစ်က (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း အရေးကြီးတယ်
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ အချစ်က ဘယ်လောက် ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိ အချိုးကျတယ် ထင်လဲဆိုရင် အခုပြောနေသလို အချစ်မရှိဘဲ အိမ်ထောင်တစ်ခုက ခိုင်မြဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချစ်ရှိနေတဲ့ လူတွေတောင် တစ်ခါတစ်လေ နားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့ ကွဲသွားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဓိက က အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အချစ်က (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။
အခုချိန်မှာလည်း အချစ်ရေးကို မစဉ်းစားသေးဘူး
၀ါဆို့အတွက် အချစ်က ပူလောင်တယ်။ လောလောဆယ်တော့ မချစ်သင့်သေးဘူး။ ၀ါဆိုက ချစ်တက်တဲ့ လူစားထဲမှာ ပါတဲ့အတွက် အခုချိန်လည်း အချစ်ရေးကို မစဉ်းစားသေးဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အသက်အရွယ်ကလည်း ငယ်ပါသေးတယ်။ ၀ါဆို့အသက် နည်းနည်းကြီးတဲ့အချိန်မှပဲ အချစ်ရေးကို စဉ်းစားမှာပါ။
၀ါဆို့အနေနဲ့ အချစ်ကို ယုံကြည်လက်ခံထားတာက
အချစ်ကို လက်ခံထားတာက ခုနပြောသလိုပဲ အချစ်က ပူလောင်တယ်။ ဒီခေတ်မှာ အချစ်စစ်၊ အချစ်မှန်ဆိုတာ အရမ်းလက်ခဲပါတယ်။ မရှိတော့ဘူးလို့ ၀ါဆိုထင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ပြောချင်တာက တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ချစ်ကြပါလို့။ သစ္စာရှိပြီး နားလည်မှုတွေလည်း ထားကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
From: Myanmar Daily News
ပေါင်သန်း၄၀နှင့် ဈေးဖွင့်မည့် ပန်းနုရောင်ကြယ်ပွင့် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ကျောက်မျက်ဖြစ်လာ
လာမည့်လတွင် ရှေ့လတွင်း ဂျနီဗာမှ ကျောက်မျက် လေလံပွဲတွင် ပေါင်သန်း၄၀နှင့် ဈေးစတင်ဖွင့်မည့် ပန်းနုရောင်ကြယ် ပွင့် အမည်ရှိ စိန်ပွင့်သည် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အကြီးဆုံး ကျောက်မျက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပန်းနုရောင်ကြယ်ပွင့် မထွက်ပေါ်လာမီ ၂၀၁၀ခုနှစ်က ကမ္ဘာ့တန်ဖိုး အကြီးအဆုံး Graff Pink စိန်ပွင့်မှာ ပေါင်၂၉သန်းသာ ရှိခဲသည်။ ယခု ၅၆ ဒဿမ ၆၀ ကာရက် ရှိစိန်ပွင့် အရွယ်လည်းကြီး၊ အရောင်းလည်း တောက်ပကာ အနာအဆာ ကင်းစင်ပြီး တန်ဖိုးအများဆုံး ကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။
ပန်းနုရောင်ကြယ်ပွင့်ကို ၁၉၉၉ခုနှစ်က တောင်အာဖရီကမှ နာမည်ကျော် စိန်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်း De Beers မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စိန်ပွင့်ကို အချောသတ် ဖြတ်တောက် ပုံဖော်သည့်ကာလ နှစ်နှစ်ကျော်ကျော် ကြာခဲ့သည်။
လူ ၇၉ ဦးသတ်မှုဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ရသည့် လူငယ်တစ်ဦး
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ဂျူအန်ပက်ဘလိုဗက်ကွက်ဇ် ဟာ ရဲတစ်ဦး၊ ကချေသည် ၁ ဦး၊ သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ဘေးကရပ်ကြည့်သူတွေကို သတ်မှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ မွန်တာရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဟာ အမြတ်ထုတ်တတ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူ တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ပြီး ဗက်ကွက်ဇ် ကို အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ အမျိုးသမီး အဖော်တစ်ဦးအပါအ၀င် ဆေးခြောက်၃၅ ထုတ်၊ ကိုကင်း ၂၂ ထုပ်နဲ့အတူ ဖမ်းဆီးမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗက်ကွက်ဇ် က သူဟာ လူ၄၅ ဦးကို သတ်တယ်လို့ ၀န်ခံထားပြီး ၃၄ ဦးမှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ယခုနှစ်အထိ သတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဗက်ကွက်ဇ် ဟာ တခြား လူသတ်သမားတွေလို အန်္တရာယ်ကြီးတဲ့သူမဟုတ်ကြောင်း၊ လူသတ်မှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်လူသတ်ခဲ့တာ မျိုး (ဒါမှမဟုတ်) မျက်မြင်သက်သေလုပ်တာမျိုးအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူဟာအမြတ်ထုတ်မူးယစ်ဆေး ရောင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို အရာရှိတွေက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အသက်၂၀အရွယ်ရှိ ဗက်ကွက်ဇ်ဟာ သေဆုံးသူ ၇၉ ဦးနဲ့ပတ်သက်နေတာဟာ အလွန်အကျွံ ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေကတော့ သေဆုံးသူတွေရဲ့အမည်နာမည်နဲ့ နေ့စွဲတွေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗိဿနိုး၊ သရေ ခေတ္တရာ ပျူမြို့ ဟောင်းများကို ကမ္ဘာ့ အမွေ အနှစ် စာရင်းဝင် အဖြစ် သတ်မှတ်ရေး လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေး ….
Posted by drmyochit Sunday, October 27, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာခင်၊ ICOMOS မှကျွမ်းကျင် ပညာရှင် Dr. Susan နှင့် တာဝန်ရှိ သူများသည် ဗိဿနိုး၊ သရေ ခေတ္တရာပျူ မြို့ဟောင်းများကို ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် အဖြစ်သတ် မှတ်ရေးအတွက် ယနေ့တွင် လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး ခဲ့ကြသည်။
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းသည် မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး မကွေး လေဆိပ်တွင် ကြိုတင် ရောက်ရှိနေသည့် ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာခင်နှင့် ICOMOS မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် Dr. Susan တို့ နှင့်အတူ ဗိဿနိုး မြို့ဟောင်းနှင့် သရေ ခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်းများ၏ ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ပုံ၊ ကြွင်းကျန် တည်ရှိနေသည့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ များကို တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်မြို့ရှိ ရှေးဟောင်း သုတေသန နည်းပညာ သင်တန်းကျောင်း (ပြည်) သင်တန်း ခန်းမ၌ ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး ဦးဝင်းကြိုင်က ဗိဿနိုး နှင့်သရေ ခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်း များကို ကမ္ဘာ့ အမွေ အနှစ် စာရင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့် ICOMOS မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တို့က သိရှိလိုသည် များကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် ဗိဿနိုးနှင့် သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ ဟောင်းများကို ကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ် စာရင်းဝင် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် အတွက် လိုအပ် ချက်များကို ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါ်စန္ဒာခင်က ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပြတိုက်အတွင်း ခင်းကျင်းပြသ ထားသည့် ပျူမြို့ဟောင်း
မှ တူးဖော်ရရှိသည့် ပျူခေတ်လက်ရာ ပစ္စည်းများကို လည်းကောင်း၊ သရေခေတ္တရာ မြို့ဟောင်း အတွင်းရှိ နန်းတော်ရာ တူးဖော်နေမှု၊ ရဟန္တာကန်၊ ဘောဘောကြီး ဘုရား၊ ဘဲဘဲဘုရား၊ ဗိဿနိုး မိဖုရား သင်္ချိုင်း၊ မကျီးကျကုန်း၊ အမှတ် (၅၃) ကုန်းနှင့် ပျူအရိုးအိုး(၃ဝ၈) လုံးတူးဖော် တွေ့ရှိ၍ ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေ များကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာ ခဲ့ကြသည်။
ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနသည် ဗိဿနိုး၊ သရေခေတ္တရာ နှင့်ဟန်လင်း ပျူမြို့ဟောင်းများကို ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဖွဲ့၏ တာဝန်ပေးချက်အရ COMOS မှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်က လာရောက် စစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ဟန်လင်း မြို့ဟောင်းအား စစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မော်ဒယ်လ်နှင့်သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဗြိတိန်တွင် အခြေချ နေထိုင်နေရာမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည့် မော်ဒယ်လ်နှင့် သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီး သူ၏ ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး New Me အကြောင်း၊ မိသားစု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Y Talk ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပြောင်းအလဲများအပေါ် သူ၏အမြင်တို့ကို The Voice က မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Voiceးစမိုင်းလ်က အရင်တုန်းကဆို မော်ဒယ်လ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အနုပညာလောကမှာ ကျင်လည်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ တေးစီးရီးခွေကို အရင်စလုပ် ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါဦး။
SM : သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကကျတော့ အချိန်ပေးပြီး လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစ်မရဲ့လက်ရှိ Life Style နဲ့ကျတော့ အဆင်မပြေဘူး။ အစ်မက စီးပွားရေးလည်း တစ်ဖက် လုပ်နေရတာ ဆိုတော့လေ။ ဒီသီချင်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကကျတော့ ကိုယ်အားတဲ့ အချိန်လေးမှာ လုပ်လို့ရတယ်လေ။ နောက်ပြီး သီချင်းဆိုတာကလည်း ကိုယ်တိုင်ရူးသွပ်တဲ့ အနုပညာ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ဖြစ်တာပါ။
Voice : New Me စီးရီးမှာပါတဲ့ တေးရေးဆရာတွေနဲ့ သီချင်း အမျိုးအစားတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
SM : ဒီစီးရီးထဲမှာ တေးရေးဆရာတွေက ရွှေဂျော်ဂျော်၊ ကျားပေါက်၊ ဗီနိုထွန်း၊ ဖော်ကာနဲ့ ရေမွန် ပါတယ်။ သီချင်း အမျိုးအစားတွေကတော့ Pop-Rock, Punk-Rock တွေပေါ့။ ရော့ခ်ဂီတဘက် နွယ်တဲ့ သီချင်းပုံစံမျိုးတွေ ပါမယ်။
Voice : ဒီစီးရီးမှာ ရော့ခ်သီချင်းတွေကို ဘာကြောင့် ရွေးဆိုဖြစ်တာလဲ။
SM : အစ်မက နဂိုကတည်းက ဒီလို Music အမျိုးအစားကို ကြိုက်တာပါ။ နောက်ပြီး ကိုယ့်အသံနဲ့လည်း လိုက်မယ်၊ အဆင်လည်း ပြေမယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့တာပါ။
Voice : New Me စီးရီးထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းတွေက ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကို ရေးဖွဲ့ထားတာလဲ။
SM : ဒီခွေထဲမှာ ထုံးစံအတိုင်း အချစ်သီချင်းတွေကတော့ များတာပေါ့နော်။ ထူးထူးခြားခြား အနေနဲ့ကတော့ အစ်မသမီးလေး အကြောင်းကို ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်က သမီးလေးတဲ့။ ကိုဗီနိုထွန်း ရေးပေးထားတာပါ။ အစ်မသမီး အကြီးလေးကို မွေးခဲ့တုန်းက ခက်ခက်ခဲခဲ မွေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အကြောင်းလေးကို ကိုဗီနိုထွန်းကို အစ်မကိုယ်တိုင် ပြောပြပြီး ရေးခိုင်းထားတာပါ။
Voice : ဒီစီးရီးက ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးစီးရီး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုအခက်တွေ ကြုံခဲ့ရလဲ။
SM : မော်ဒယ်လ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် အလုပ်က အစ်မနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိပါတယ်။ သီချင်းကိုလည်း အစ်မကအပျော်ပဲ ဆိုဖူးတာပါ။ ကိုယ့်အသံကလည်း အသံလုံးကြီးတဲ့အတွက် ဘယ်သီချင်းကို ဘယ်လိုဆိုရမှန်း အစ်မ မသိဘူးပေါ့နော်။ အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကုန်လုံးကလည်း သင်ပေးတယ်။ ပြောပြပေးကြတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း လေ့ကျင့်ပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်တော့ ဆိုထားပါတယ်။
Voice : ဒီစီးရီးကို ဖြန့်ချိမယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပေးပါဦး။
SM : ဒီစီးရီး Audio ကို နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ စဖြန့်မယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ တော်ဝင်စင်တာမှာ Promotion အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။ MTV ကိုတော့ ၂၀၁၄ နှစ် စပိုင်းမှာထွက်ဖို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ MTV က ခြောက်ပုဒ် ကျော်ကျော်လောက် ရိုက်ပြီး သွားပါပြီ။
Voice : ပြည်ပမှာ အကြာကြီးနေပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လိုကြောင့် ပြန်လာ ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
SM : ဒါကတော့ အစ်မတို့လည်း ဟိုမှာနေလာတာ ကြာပြီပေါ့နော်။ အစ်မ အမျိုးသားကလည်း ဒီကိုပြန်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ချင်တဲ့အတွက် မိသားစုလိုက် ပြောင်းလာပြီး ပြန်နေဖြစ်တာပါ။
Voice : စမိုင်းလ် ပြန်လာတဲ့အခါမှာ မြင်တွေ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
SM : မြန်မာနိုင်ငံက တော်တော် ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ စီးပွားရေးရော၊ လူမှုရေးရော ပေါ့နော်။ အစ်မတို့တုန်းကဆို စက်ပစ္စည်းပိုင်းက တိုးတက်မှုတွေ သိပ်မရှိသေးဘူး။ အခုဆို အစစ အရာရာ ခေတ်မီ တိုးတက်လာတဲ့အတွက် အစ်မကတော့ အားရပါတယ်။
Voice : စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခု အနေနဲ့ Y Talk ကို တည်ထောင်ဖို့ စတင် စိတ်ကူးဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါဦး။
SM : အစ်မ နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတုန်းကဆို မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ အစ်မအမေက အစ်မကို အမြဲတမ်း ဖုန်းဆက်ချင်တယ်။ ဒါကတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း ဒီကနေ နိုင်ငံခြားကို ဖုန်းဆက်ဖို့ကလည်း ဈေးအရမ်းကြီးတယ်လေ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေ အဆင်ပြေအောင် ဒီလုပ်ငန်းလေး ထောင်ဖို့ အစ်မတို့ စဉ်းစားဖြစ်တယ်။ အစ်မ အမျိုးသားကလည်း ဒီ Telecom ပိုင်းကို လုပ်နေတာ ဆိုတော့လေ ကိုယ်ချည်းပဲ အဆင်ပြေဖို့ တစ်ခုတည်းကြောင့် လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
Voice : မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးတွေကို အိမ်နဲ့အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ဖို့ Y Talk ကလုပ်ဆောင် ပေးခဲ့တယ်နော်။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ လုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့တာလဲ။
SM: စီးပွားရေးသမား အများစုကတော့ ကိုယ့်အကျိုးကိုပဲ ကြည့်ကြတာပေါ့ နော်။ အစ်မတို့ကတော့ စီးပွားရေး သက်သက်အတွက် တည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်း မဟုတ်တဲ့အတွက် လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ မလေးရှားမှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေထဲက တစ်ယောက်သာ ရှိနေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှလေး လုပ်ပေးတာပါ။ အစ်မတို့က အရမ်းကြီး ချမ်းသာနေ လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆီးဂိမ်း ဆိုရင်လည်း အစ်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ Communication က အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ဖုန်းဆက်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ အချက်က နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတယ်။ အဲဒါတွေကို မခံချင်တဲ့အတွက် ဘယ်နိုင်ငံ ဆီးဂိမ်းမှာမှ မရှိဖူးတဲ့ Free Call တွေ ပေးဆက်ဖို့ လုပ်ထားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်း အားဖြင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ကို မြင့်တက်စေသလို အစ်မတို့ ကုမ္ပဏီလေးကိုပါ တစ်ခါတည်း ကြော်ငြာပြီးသား ဖြစ်သွား တာပေါ့။
Voice : Y Talk လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်တဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ခဲ့ရလဲ။
SM : အစ်မတို့ Y Talk ကို စလုပ်တုန်းကဆို အင်တာနက်ကို အဓိက အားထားပြီး လုပ်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည် အင်တာနက်ကလည်း သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျသွားတဲ့ အချိန်လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ Customer တွေလည်း ဒုက္ခရောက်တယ်။ အစ်မတို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အစ်မတို့ လုပ်ထားတဲ့ ဟာလေးကတော့ အင်တာနက်မလိုဘဲ အသုံးပြုလို့ ရတဲ့အတွက် တော်တော်လေး အဆင်ပြေလာပါပြီ။
Voice : မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မော်ဒယ်လ်လောကက အခုဆို မော်ဒယ်လ်တွေ အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ အရမ်းများလာတယ်။ မော်ဒယ်လ် လုပ်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ် စမိုင်းလ် အမြင်ကို ပြောပြပေးပါဦး။
SM: ပြောင်းလဲလာတဲ့ အခြေအနေတွေကို အစ်မ ဝမ်းသာပါတယ်။ အစ်မ တို့တုန်းကတော့ မော်ဒယ်လ်လောကက လူလည်းနည်းတယ်။ တချို့လူတွေက မော်ဒယ်လ်ဆိုရင် အထင်အမြင် သေးကြတာတွေ ရှိတယ်။ အခုလို အခွင့်အလမ်းတွေ များလာတာ မော်ဒယ်လ်တွေ အတွက် ကောင်းတယ်။ တချို့ဟာလေးတွေတော့ ပြင်ဆင်ဖို့ ရှိသေးတာပေါ့နော်။ သူတို့ စာရိတ္တပိုင်းတွေ၊ နောက်ပြီး မော်ဒယ်လ်လောကကို ခုတုံးတစ်ခု အနေနဲ့ လုပ်စားတာမျိုးကိုတော့ အစ်မ မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောကမှာမဆို အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲနေမှာပါ။
Voice : New Me စီးရီးမှာ ကော်ပီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဘယ်နှပုဒ်စီပါလဲ။
SM : ဒီစီးရီးမှာက တစ်ခွေလုံး ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်တွေချည်းပါပဲ။ ဒီလောက် တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကော်ပီကတော့ မဆိုသင့်တော့ပါဘူး။ Copy ကျတော့ သူများဆိုထားတဲ့ သီချင်းနဲ့ တိုက်နေတာမျိုး ဖြစ်မှာစိုးတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ရှိုးတွေ ဆိုမယ်ဆိုလည်း ကိုယ့်သီချင်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် သတ္တိရှိရှိ၊ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ချပြနိုင်တာပေါ့နော်။
Voice : ဒီစီးရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စမိုင်းလ်ဘက်က ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး။
SM : ဒီစီးရီးက အစ်မရဲ့ ပထမဆုံးစီးရီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အရမ်းကို ရင်ခုန်နေပါတယ်။ တော်တော်လေးလည်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးဘက်ကလည်း အစ်မရဲ့စီးရီးလေးကို နားထောင်ပြီး ဝေဖန် အကြံပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဖခင်၏ မီးရှို့သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ယီမင်အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး
စေ့စပ်ထားသူနဲ့ အဆက်အသွယ် လုပ်တာကြောင့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ယီမင် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးကို သူမရဲ့ဖခင်က မီးရှို့ သတ်ပစ်ခဲ့ကြောင်းယီမင်ပြည် ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြောကြား ပါတယ်။ အသတ်ခံရသူရဲ့ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖခင်ကို တိုင်ဖ်စီရင်စု အနီးရှိ ရွာတစ်ရွာမှာ ဖမ်းမိ ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ် အသတ်ခံရတဲ့ အချိန်ကိုတော့ ပြောကြားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒီလို လူသတ်မှုမျိုးကို ကျူးလွန်သူတွေ ကတော့ ဒါဟာ ဂုဏ်တက်ဖွယ် ရာဇ၀တ်မှုလို့ ယုံကြည် နေကြပါတယ်။
ဒီရာဇ၀တ်မှုမျိုး တွေဟာ ကလေးငယ်များကို လက်ထပ် ပေးခြင်းနဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ် လူသတ်တယ် ဆိုတဲ့ ဓလေ့ က ယီမင်နိုင်ငံမှာ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေကြောင်းလည်း ဖော်ပြနေ ပါတယ်။ ကလေး အခွင့်အရေး ဦးဆောင် လှုပ် ရှားသူ ရှေ့နေ အာမက်အယ်လ်ကွာရှီနဲ့ သူ့အဖွဲ့ဟာ ဒီမတော်တဆမှုကို စုံစမ်း စစ်ဆေး သွား မှာဖြစ်ပြီး သူကတော့ ဒါဟာ ဂုဏ်တက်စေတဲ့ လူသတ်မှုလို့ ယူဆ ထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ အလီအယ်လ်ဘာရီက ဒီလိုဂုဏ်တက် အောင်လုပ်တဲ့ လူသတ်မှုတွေကို အစိုးရက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုနေပြီး ဒီလိုမျိုး လူသတ်မှု တွေဟာ မထင်မရှားနဲ့ ပြီးဆုံးသွားလို့ သံသယရှိတဲ့ လူတွေဟာ အပြစ်ပေး မခံရဘဲ ရှိနေကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြား ပါတယ်။ ရဲတွေက ၀န်ကြီးဌာနကို တင်ပြတဲ့ တင်ပြချက် မှာတော့ ဖခင်ဟာ သူ့သမီးက သူမနဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့လူနဲ့ ပြောဆို ဆက်သွယ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပေးကာ ဒီလို လူသတ်မှုကို ကျူးလွန် ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
From: MRTV 4
သုဝဏ္ဏ အားကစားဝင်းအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပိုးသတ်ဆေးသောက် သေဆုံး
Posted by drmyochit Sunday, October 27, 2013, under မှုခင်း | No comments
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သုဝဏ္ဏ အားကစားဝင်းအတွင်း သီးပင်စားပင်များ စိုက် ပျိုးရောင်း ချသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် စီးပွားရေး မပြေလည်သောကြောင့် အဆိပ်သောက်ကာ သေဆုံး ခဲ့မှု အောက် တိုဘာလ ၂၆ ရက် ညနေ ၆ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူ များက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
သေဆုံးသူ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မငြိမ်းသင်းမှာ သုဝဏ္ဏ အားကစားဝင်း အတွင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ် ငန်း လုပ်ကိုင်ကာ မိသားစု ငါးဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းတွင် အခြားသော လူမှုကိစ္စ ပြဿနာများ မကြား မိသောကြောင့် စီးပွားရေး အဆင်မပြေ၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း အဆိုပါ အားကစား ဝင်းတွင် သီးပင်စားပင်များ စိုက်ပျိုးရောင်းချနေသူ ဦးတင်မျိုးဝင်းက ဆိုသည်။
သေဆုံးသူ မိသားစုမှာ ယခင်က ရန်ကင်းမြို့နယ် ဘောက်ထော် မှတ်တမ်းရုံးတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လခန့်မှစ၍ သုဝဏ္ဏ အားကစားဝင်းအတွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ယခုစိုက်ပျိုးနေသည့် နေရာမှာ မြေနိမ့်ပိုင်း ဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် ရေ ဝပ်သောကြောင့် စိုက်ပျိုးရန် ခက်ခဲ့သည့်အတွက် စီးပွားရေး မပြေလည်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြား သည်။
“အိမ်မှာလူတွေမရှိတုန်း ရွှေအင်ဒို ပိုးသတ်ဆေးကို သောက်လိုက်တာ။ သိသိချင်း တက္ကစီငှားပြီး လိုက်ပို့တာ ဘုရားလမ်းမှာ ကားတွေပိတ်နေလို့ စံပြဆေးရုံထိ လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာ အကောင်းကြီးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ အဆိပ်တွေ ထုတ်နေရင်းနဲ့ နှလုံးရပ်ပြီး သေသွားတာ” ဟု သေဆုံးသူကို ဆေးရုံသို့ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူ အသက် ၃၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
၎င်းမသေဆုံးမီ မိသားစုများထံတွင် စီးပွားရေး မပြေလည်သည့် ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏ ညည်း ညူလေ့ ရှိကြောင်း၊ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းတွင် Sea Games ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပမည် ဖြစ်သဖြင့် ၎င်းတို့ နေထိုင် သည့် နေအိမ်များ ပြောင်းရွှေ့ပေးရမည် ဖြစ်၍ စိတ်ဓာတ်ကျကာ ယင်းကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်း ကြံစည်သည်ဟု ထင်ကြေး ပေးကြသူများလည်း ရှိကြောင်း အဆိုပါ ရပ်ကွက်မှ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးဖြစ် သူ ဦးဇော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
“နေအိမ်တဲတွေကို ခေတ္တပြောင်းခိုင်းတာပါ။ အရင်စိုက်နေကျအတိုင်း ဆက်လုပ်ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ Sea Games ပြီးရင် အရင်လို တဲထိုးပြီး ပြန်နေခွင့် ပေးထားပါတယ်” ဟု ၎င်းကထပ်မံ ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့မရဲစခန်းက သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၂၂/၁၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့မရဲစခန်းထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
သေမိန့် ကျပြီးသူ တစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း..( မြသန်းစံ)
Posted by drmyochit Sunday, October 27, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
တစ်လောကပင် သူနှင့် ကျွန်တော်ဆုံတွေ့ ခဲ့သေးသည်။ သည်တုန်းက သူသည် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်၊ တက်တက်ကြွကြွ၊ သူ့ မှာ ညှိုးငယ်နေသည့် သဏ္ဍာန် အလျဉ်းမရှိ၊ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ပြန်ဆုံသည့် အထိမ်းအမှတ် ယမကာဝိုင်းသို့ကျွန်တော်တက်ခဲ့ရသေးသည်။ ကျွန်တော့်ရှေ့ ဖန်ခွက်ထဲမှ အချိုရည်တွေ ကို ကြည့်ကာ သူကပင် ရယ်ပွဲဖွဲ့ လိုက်သေးသည်။
"ဟား-ဟား၊ ငါ့သူငယ်ချင်းကြီး ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ"
သူက အရက်ခွက်ကို မော့ချရင်းမှ ကျွန်တော့်ကို ပြောနေသည်။ ကျွန်တော့မှာ သူတို့ ကြားထဲတွင် သင်းကွဲငှက် တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေသည်။ ကြာတော့ သူ အားနာလာပုံရသည်။ ကျွန်တော် တည်းခိုရာ နေရာအရောက် သူအသံတွေ လေးတွဲ့ နေလေပြီ။
"ငါတို့ဝိုင်းထဲမှာ မင်းတစ်ယောက်တည်း အချိုရည်သမားဖြစ်နေတော့ မင်းအနေရခက်နေမှာပဲ၊ ငါ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်ဆွဲလိုက်ဦးမယ်ကွာ၊ ကျောင်းပြီးကတည်းက မဆုံဖြစ်တော့တာ၊ အခုဆုံတုန်းလေး လုပ်လိုက်ဦးမယ်"
ကျွန်တော်က အလိုက်သင့်နေပေးသော်လည်း သူတို့ အနေဖြင့် ကျွန်တော့်အပေါ် ဆက်ဆံရခက်နေပုံ ရသည်။ ကျွန်တော့်အပေါ် ပြောစရာစကားလည်းမရှိ။ ကျွန်တော်ကလည်း သူတို့ အပေါ် ပြန်ပြောစရာ အကြောင်းလည်း မရှိလှပေ။ သူတို့ ၏ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ကိစ္စများတွင် ကျွန်တော်ကလည်း ပါဝင်ပတ် သက်ခြင်းမရှိခဲ့။ သည်တော့ ကျွန်တော့်မှာ လူပိုလို ဖြစ်နေသည်။ သို့ နှင့် ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ပြန်ပို့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သည်တုန်းက ရွှင်မြူးတက်ကြွနေသော သူ့ ပုံသဏ္ဍာန်သည် ကျွန်တော့်မျက်စိထဲ စွဲထင် ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
တစ်လလောက်ကြာတော့ သူ့ အသံကို တယ်လီဖုန်းခွက်ထဲမှတစ်ဆင့် ကြားလိုက်ရသည်။ ဖုန်းခွက်ထဲတွင် သူ့ အသံတွေ မှိန်ဖျော့နေသည်ကို ကျွန်တော် သတိထားမိသည်။ ထိုအသံမှတစ်ဆင့် ဖုန်းပြောနေသည့် သူ့ ရုပ်သွင်ကို မှန်းဆပုံဖော်ကြည့်မိသည်။ ဘယ်လောက်များ ညှိုးလျော့နေမည်လဲ။ သူ့ အသံခြောက်ကပ် ကပ်ကြီးတွင် လှိုင်းအနိမ့်အမြင့် မရှိတော့။ တကယ့် တန်းတန်းကြီး၊ သူ့ အသံက အေးစက်သော်လည်း သူ့ ရင်ထဲတွင် အဘယ်မျှ ပူလောင်ပြင်းထန်နေမည်ကို ကျွန်တော် ရိပ်မိနေသည်။ သူ့ စိတ်တွေကော ဘယ်လောက်ဗြောင်းဆန် နေသလဲမသိ။ သူ့ အပူသည် တယ်လီဖုန်းကြိုးများမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ထံ ကူးစက်လာသည်ဟုပင် ထင်ရသည်။ ဟိုတုန်းက ရွှင်မြူးတက်ကြွ လန်းဆန်းနေသော အသံမျိုးနှင့် ကွားခြား လှပါဘိခြင်း။
ဌာနတွင်း တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူးအတွက် သူ့ ဆေးစစ်ခံရင်း ကု၍မရသော ရောဂါပိုးတစ်ခုကို သူ့ သွေးထဲမှာ စစ်ဆေးတွေ့ ရှိသွားသည်။
ကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် နောက်တစ်ခါ စစ်ဆေးပြန်သည်။ အဖြေမပြောင်းလဲ၊ သူတုန်လှုပ်သွားသည်။ သည် ရောဂါပိုးသည် ဘယ်တုန်းကများ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ နေရာယူသွားသည်မသိ။ သူအလုပ်မှ ရုတ်တရက် အနားယူလိုက်ရသည်။ မောင်းနှင်နေသည့် စက်တစ်လုံး လည်ပတ်ကောင်းနေစဉ်မှာ ခါးပတ်ကြိုးပြတ် သွားသည်သို့ဖြုန်းခနဲ။
မမျှော်လင့်ထားသော အခြေအနေတစ်ခု ရုတ်တရက်ရလာသူတိုင်း ကြောင်စီစီ ဖြစ်သွားတတ်တာ အမှန်ပင်။ လက်ရှိလည်ပတ်နေသော အရှိန်အဟုန်နှင့် အကြာကြီးနေရမည်ဟု ထင်ထားတတ်ကြတာ ကလည်း ဓမ္မတာမဟုတ်လား။ အခြေအနေသစ်တစ်ခုသို့ရုတ်ချည်းပြောင်းလိုက်ရသောအခါ ထိုအခြေ အနေ သစ်အတွက် ကိုယ့်ဘ၀ထဲမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဘာမှ ပြင်ဆင်ထားတာမရှိ၊ ထိုအခါ ပြင်ဆင်ထားမှု မရှိခြင်း၏ အခြေအနေကို ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်အဖြစ် ပြင်းထန်စွာခံစားရစမြဲ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းလည်း သည်လိုဖြစ်သွားပုံရသည်။ သူ့ အသံကို ခန့် မှန်းကြည့်ရုံနှင့် ဆောက်တည်ရာမရဖြစ်နေသော သူ့ စိတ်တွေကို ကျွန်တော် အထင်းသားမြင်နေရသည်။ ကျွန်တော် သူ့ ကို အားပေးရသည်။
်"ဘာမှ စိတ်မပျက်ပါနဲ့သူငယ်ချင်းရာ၊ ငါတို့ ရှိပါသေးတယ်။ မင်းကို ငါလိုလေသေးမရှိ ကူညီပါ့မယ်။ စိတ်အးအေးသာထား"
"စိတ်အေးအေးထားဖို့ ဆိုတာက အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တယ်ကွ၊ အခု ငါ့စိတ်ကို ဘယ်လို အေးအောင် လုပ်ရမလဲ၊ အဲဒါကို ငါသိချင်တယ်"
"ဒီလိုဆိုရင် ဖုန်းထဲမှာပြောဖို့ က သိပ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းအားရင် လာခဲ့ပါလား။ ဒါမျိုးက အချိန်ယူပြီး သေချာပြောမှ နားလည်မှာ မင်းလာနိုင်မလား"
"အေ-လာခဲ့မယ်ကွာ၊ ငါတော့ အခုစိတ်အေးတဲ့နည်းကလွဲလို့တခြားဘာမှ မသိချင်ဘူး။ ကဲ-ငါအခုလာ ခဲ့မယ်။ မင်ဆက်စောင့်နေ"
သူ့ ဘက်က ဖုန်းချသွားသည်။ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ကြီးဖြစ်သည်။ သြော်-သူ့ ခမျာ အရိပ်တစ်ခုခုကို ရှာနေရ သည်ကိုး။ သူ့ စိတ်ငြိမ်းချမ်းဖို့ခိုလှုံစရာအရိပ်တစ်ခုရနိုင်ဖို့သူသဘောပေါက်နားလည်သည်အထိ ကျွန်တော် ရှင်းပြရပေမည်။ သူ ကျွန်တော့်ထံသို့ကားဖြင့်လာနေစဉ်အတွင်း ကျွန်တော့်မှာ သူ့ ကို ပြောရမည့် စကားတွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းရသည်။ စာအုပ်စင်မှ စာအုပ်တွေကို ရှာရသည်။ တိတ်ခွေစင်မှ တရားတိတ်ခွေများကို ရွေးချယ်ရသည်။ လတ်တလော သူနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မည့် တရားစာအုပ် တရားတိပ်ခွေ။
ကျွန်တော်က ဆရာတော်ဦးဇောတိက (ပျဉ်းမနား)၏ တရားတိတ်ခွေတွေနှင့် အမြဲတစေ ထိတွေ့ ယဉ်ပါးနေ သူဖြစ်သဖြင့် ဘယ်လို စိတ်အခြေအနေဖြစ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလျှင် ဘယ်တိပ်ခွေထဲက ဘယ်ဟောချက်နှင့် အံဝင်မည်ကိုပါ ခန့် မှန်းတတ်လာခဲ့သည်။ သို့ နှင့် အချိန်မဆိုင်းဘဲ အဖြေရသည်။
"နကုလမာတာကို ဘုရားဟောဖူးတာရှိတယ်။ တစ်ခဏလောက်များ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာတယ်လို့ ပြောတဲလူဟာ အသိဥာဏ်နည်းလို့ပြောတာပါတဲ့။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ အစဉ် အမြဲပဲ သူ့ မှာ ဒုက္ခဝေဒနာ တွေ ရှိနေတာပဲနော်၊ သွားလာလုပ်ကိုင်လို့ဖြစ်နေသေးလို့ တာ သူ့ ကို ရောဂါလို့ လဲ နာမည် တပ်မနေတော့ဘူး။ ဆေးရုံလည်းတက်စရာမလိုဘူး။ ဆရာဝန်လည်းပြစရာ မလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် မအီမသာ ဖြစ်တဲ့သဘောတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ ရင်ထဲကပူသလိုလို မောသလိုလို တစ်ခါတလေ ခေါင်းထဲကမူးသလိုလို၊ ဒီလိုဟာတွေဟာ အနည်းနဲ့ အများ လူတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ လူတွေက ဒီလောက် မသိသေးဘူး။ စိတ်တွေက တက်ကြွတဲ့လူတွေဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း လှုပ်ရှားရတဲ့အရွယ်၊ Active ဖြစ်တဲ့အရွယ်ဆိုတော့ သတိမပြုမိလိုပါ။ လုပ်စရာ ကိုင်စရာတွေ များနေတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင် ကိုင်ချင်တာတွေကိုပဲ သိပ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ Involve ဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်နေရတာဆို တော့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မအီမသာမှုတွေကို သိပ်ပြီး အရေးမစိုက်နိုင်ကြဘူး။ မွေးခါစကတည်းက မအီမသာတဲ့သဘောက ရှိနေသေးသားပဲ။ ဒီမအီမသာဆိုတဲ့သဘော၊ မသက်မသာဆိုတဲ့သဘောကိုပဲ Disease လို့ခေါ်တာပါ။ ရောဂါအမည် မတပ်သေးလို့ သာ။ ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲက မအီမသာသဘောကို အမြဲ တမ်းလိုလိုပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေလို့ သာ နည်းနည်းလေး နေသာတာပါ"
ထိုစကားအပေါ် အခြေခံ၍ သူ့ ကို ကျွန်တော် အားပေးရပေမည်။ သူက ရောဂါတစ်ခုရှိပြီဟု ဆိုင်းဘုတ် အတပ်ခံလိုက်ရသူ။ ကျွန်တော်တို့ က ဆိုင်းဘုတ်မရှိသေးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဟု ဆိုကြပါစို့ ။ ဆိုင်းဘုတ် အတပ်မခံရသေးသည့် ကျွန်တော်တို့ တွင်လည်း ရောဂါဝေဒနာပေါင်းစုံ ပိုးမွှားပေါင်းစုံတို့ သည် ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲ နေရာအနှံ့ ရှိနေပေလိမ့်မည်။ သူ့ ထက်လည်း ဆိုးလျှင် ဆိုးသွားနိုင်သည်။ ဘာမှ မသေချာ။
သို့ သော် သူ့ ဆိုင်းဘုတ်က ခေတ်ပေါ်ဆိုင်းဘုတ်။ တနည်းအားဖြင့် ကုစရာဆေးမရှိသေးသည့် ရောဂါဟု ဆိုသည့်အတွက် ထိုအရှိန်ကြောင့် လူတွေ ကြောက်နေကြခြင်းပါပေ။ သို့ သော် ကုစရာဆေးရှိသည့် ရောဂါ များနှင့်ပင် ကွယ်လွန်သူတို့ လည်း ရှိခဲ့ကြပြီးပေပြီ။ အသေအချာ ဂရုတစိုက်ကုစားလျက်ကပင် တိမ်းပါးခဲ့သူ တွေလည်း ရှိခဲ့ကြပြီးပြီ။ လူတို့ ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ ရောဂါဘယတွေကို ကုစားပေးရင်း အသက်ကယ်နေကြ သည့် ဆရာဝန်တွေပင်လျှင် ထိုရောဂါဘယတွေ သူတို့ခန္ဓာထဲ နေရာယူလာသောအခါ သူတို့ အသက်ကို သူတို့မကယ်နိုင်ကြတော့။ ဘာမျှမမြဲ၊ ဘာမျှအစိုးမရ၊ သူ့ သဘောသူဆောင်လာသည့် သေခြင်းတရား၊ မရင်ဆိုင်လိုသော်လည်း ရင်ဆိုင်ရပေမည်။
ရုတ်တရက်ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းသည် သေမိန့် ကျပြီးသူဟု ထင်ရပေမည်။ သေဖို့ ရက် အတိအကျ သတ်မှတ်ခံလိုက်ရသူကဲ့သို့ရှိပေမည်။ ခန့် မှန်းခြေအရ သည်ရောဂါကြောင့် သည်နှစ်အပိုင်း အခြားအတွင်းမှာ သေရတော့မည်ဆိုလျှင် မသေမီ ဘာလုပ်မည်နည်း။ ရသည့်အချိန်အတွင်း ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အချိန်တွေကို ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချသွားမည်နည်း။
"အဆိုးတွေကို ထိုင်တွေးပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် စိတ်ဓာတ် အင်အားတွေကုန်မယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အင်အားတွေ ကုန်မယ်။ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်ဖြစ်ပြီး ညှိုးနွမ်းနေမယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ သူနဲ့ တွေ့ ရရင် တခြားလူတွေပါ စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်။ တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဘက်ကနေ ကြည့်ပြီးတော့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်နေရင် ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။ သူများအတွက်လည်း အကျိုးရှိတယ်။ တရားအားထုတ်တဲ့သူ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဟာ စိတ်ဓာတ်ကျခဲတယ်။ အဆိုးနဲ့ တွေ့ ရလည်း အဆိုးထဲက အကောင်းကိုရအောင် ယူတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲသတိနဲ့နေတဲ့အကျင့်ကို လုပ်နေမှာသာ ဘ၀အတွေ့ အကြုံအမျိုးမျိုး ကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုး တွေ့ ရတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်ရှိမယ်။ အကောင်းနဲ့ တွေ့ တဲ့အခါ ငါမှငါဆိုတဲ့ မာနဖြစ်မသွားဘူး။ အဆိုးနဲ့ တွေ့ ရတဲ့အခါ စိတ်ဓာတ်ကျ မသွား ရဘူး။ ဘယ်လို လောကဓံနဲ့ တွေ့ ရတွေ့ ရ အားလုံးဟာ ရင့်ကျက်မှုကို အထောက်အကူပြုမယ်"
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကို အားပေးရန် တရားစကားတွေ ရှာဖွေစုဆောင်း နေဆဲမှာပင် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကားက အိမ်ရှေ့ မှာ ဆိုက်လာသည်။ သူ့ ကို ဆရာတော်ဦးဇောတိက ဟောကြား သည့် ဗုဒ္ဓ၏ရင်ခွင်မှာ တရား တိပ်ခွေမှ အကြောင်းအရာများကို ဖောက်သည်ချရပါမည်။
သူနှင့် ကျွန်တော် စကားတွေ အများကြီး ပြောရပေလိမ့်ဦးမည်။
အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသော သူ့ ကို လှမ်းကြိုလိုက်ရသည်။ သူမျက်နှာမကောင်း၊ ခြေလှမ်းတွေက တုံ့ နှေးနှေး၊ ဘိနပ်ချွတ်နေပုံက ဆုတ်ဆိုင်းဆိုင်း။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် "ဟေ့ သူငယ်ချင်းကြီး ဘယ်လိုလဲကွာ ဘာညာ" ဟု ဆိုကာ ၀ုန်းဒိုင်း ဘိနပ်ချွတ်၊ ကမန်းကတန်း အခန်းထဲဝင်လာတတ်သော သူ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ သည် ယခုတော့...။
ဧည့်ခန်းတွင်း ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်လိုက်ပုံကလည်း အရုပ်ကြိုးပြတ်။ "ဟူး" ကနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော သက်ပြင်းကလည်း ရှည်လျားလှပါဘိ။ သူ့ ခမျာ ကျွန်တော့်ကိုလည်း မျက်နှာချင်း မဆိုင်နိုင်ပြန်။ ပြူးတင်း ပေါက်မှနေ၍ ခပ်ဝေးဝေးတစ်နေရာကို ကြည့်နေသည့် သူ့ မျက်လုံးတွင် မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသော အတွေး တွေ ထင်ဟပ်နေသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ ကျွန်တော်ကပင် စကားစရသည်။
"ရုတ်တရက်ဆိုတော့ မင်းဘယ်လောက် ခံစားရမလဲဆိုတာ ငါကိုယ်ချင်းစာပါတယ် သူငယ်ချင်း။ တကယ် တော့ ငါ့အနေနဲ့ က အားပေးရုံ နည်းလမ်း ပြောပြရုံဆိုတော့ ကာယကံရှင် မင်းလောက်တော့ မခံစားရ ဘူးလို့မင်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်း ငါခံရမှာပါပဲ။ ဟုတ်တယ် မင်းက ကာယကံရှင်ကိုး။ ငါက ဘေးလူ ဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာရုံကလွဲလို့ကာယကံရှင်လောက်တော့ ခံစားချက် မပြင်းနိုင်ဘူးပေါ့ကွာ"
သူဘာမျှ မပြော။ ငြိမ်နေသည်။ အဝေးတစ်နေရာကို ကြည့်နေသည်။ သူ့ မျက်လုံးတွင် ဘာကိုမျှ မမြင်မှာ တော့ သေချာသည်။ သူ့ စိတ်က ကျွန်တော့်စကားကို နားထောင်နေပေလိမ့်မည်။ သို့ အတွက် မျက်လုံးကို ဖွင့်၍ ကြည့်နေသော်လည်း ဘာကိုကြည့်နေမိမှန်းသိမှာ မဟုတ်သဖြင့် သူ့ ခမျာ မြင်နေသော်လည်း သိမည် မဟုတ်ပေ။
ကျွန်တော်က လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ဓမ္မဒါန စာအုပ်ငယ်ကလေးကို သူ့ ထံ လှမ်းပေးလိုက်သည်။ ဆရာ ဦးဇောတိက (ပျဉ်းမနား) ဟောကြားချက်ကို ပြန်လည် ပုံနှိပ်ထားသည့် ဓမ္မဒါနစာအုပ်ကလေး။ (In the lap of the Buddha) ဗုဒ္ဓ၏ ရင်ခွင်မှာ။
သူက စာအုပ်ကလေးကို လေးလံလှသော သူ့ လက်များဖြင့် လှမ်းယူနေသည်။
"ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့ အိမ်ရောက်ရင် မင်းအေးအေး ဆေးဆေးဖတ်ပေါ့ကွာ၊ ဒါက တရားတိပ်ခွေ၊ ဒီထဲမှာကတော့ ဆရာတော်ဟောပြောချက် အပြည့်အစုံပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ နည်းနည်းချုံ့ ထားတာ ပေါ့"
ကျွန်တော်တော်က ကတ်ဆက်ထားရာနေရာသို့လျှောက်သွားပြီး တိပ်ခွေကို အစမ်းသဘောဖွင့်ပြလိုက် သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကျွန်တော်က သူ့ ကို ပြောပြနေခြင်းထက် ဆရာတော်၏ အသံက သူ့ အတွက် စိတ်အေးသက်သာရာရမှုကို ပိုဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ဆရာတော်၏ အေးမြသော အသံသည် အိမ်အတွင်း၌ ဖြန့် ကျက်လွှမ်းမိုးသွားတော့သည်။
"မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ်မှာ ပါဠိလိုဟောခဲ့တဲ့ ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကို ဒီမှာ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကလေးက အင်မတန်ရှင်းပါတယ်။ အင်မတန်ရိုးပါတယ် Be an island unto yourself.
ပင်လယ် သမယဒ္ဒရာ အလယ်ခေါင်မှာ ကျွန်းလေးရှိတယ်။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာမှာလည်း မုန်တိုင်းတွေထ၊ လှိုင်းကြီးတွေထ နေတယ်။ အဲဒီမှာ လူတစ်ယောက်ကလည်း မျောနေတယ် ဆိုပါတော့၊ ကျွန်းကလေး တစ်ကျွန်းမြင်ရင် သူဘယ့်နှယ်နေမလဲ၊ အင်မတန် ၀မ်းသာမယ်၊ ဒီကျွန်းကိုသာ ငါရောက်သွားရင်တော့ ငါဒီဒုက္ခကနေ လွတ်ကင်းပြီ၊ အားကိုးရာ အားထားရာရပြီ။ ဆောက်တည်ရာရပြီ။ အဲဒီလိုဖြစ်မှာနော်၊ မိမိ ကိုယ်ကိုလဲ အဲဒီ လှိုင်းတံပိုးတွေထနေတဲ့ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာထဲက ကျွန်းကလေး တစ်ကျွန်းသဖွယ်ဖြစ် အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ယူရမှာနော်။ အလိုအလျောက်တော့ ဖြစ်မလာဘူး။ Be your own refuge...refuge ဆိုတာ အားကိုးရာ အားထားရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတဲ့။ ပြီးတော့ Make the Dhamma your island တရားကို မိမိအတွက် ဆောက်တည်ရာဖြစ်တဲ့ ကျွန်းကလေးသဖွယ် ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ Make no other refuge တခြား ဘယ်အရာကိုမှ မိမိအတွက် ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာ မဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီစကားတွေဟာ အင်မတန် လေးနက်တယ်နော်။
လူဆိုတာ ပြင်ပမှာပဲ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာကြတာ။ အဲဒီလို ဖြစ်အောင် မလုပ်နဲ့ ။ ဒီစကားတွေဟာ အင်မတန်လေးနက်တယ်နော်။ လူဆိုတာ ပြင်ပမှာပဲ ကိုးကွယ်ရာ အားထားရာ ရှာလေ့ရှိတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားမှာ ဘုရားက မိမိကိုယ်ကိုပဲ အားကိုးတယ်။ ပြင်ပ ဘယ်သူ့ ကိုမှ အားမကိုးဘူး။ အဲဒီတော့ အင်မတန် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာ ရင့်ကျက်တဲ့ သူမှသာလျှင် အဲဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးထားလို့ ရတယ်။ အဲဒီ အလုပ်ကို လုပ်လို့ ရတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တဲ့သူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားမကိုးချင်ဘူး။ အားကိုးရာကိုပဲ ရှာနေတယ်။ ဘယ်သူ့ ကိုများ အားကိုးရမလဲ။ ကယ်တင်ရှင်၊ တန်ခိုးရှင်၊ အဲဒီလို လိုက်ရှာနေတာနော်။ အဲဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားက ကယ်တင်ရှင်၊ တန်ခိုးရှင် ကိုးကွယ်တဲ့တရား မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ကိုးကွယ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် မြတ်စွားဘုရားတောင်မှ "တရားကိုသိမှ ဘုရားကို သိမယ်" "တရားကိုမြင်မှ ဘုရားကို မြင်မယ်" "မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တော်တောင်မှာ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ရဲ့ ကိန်းဝပ်ရာသာ ဖြစ်တယ်နော်"
ဧည့်ခန်းထဲတွင် သူနှင့်ကျွန်တော် တရားအတူတူနာနေရင်းမှ သူ့ ကို အ့ကဲခတ်နေရသည်။
သူစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိလျှင် ကျွန်တော် ကက်ဆက်ကို သွားပိတ်လိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးသည်။ သို့ သော် သူ စိတ်ဝင်တစားရှိနေသဖြင့် ကျွန်တော် ဆက်၍ ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ဆရာတော်၏ တရားသံကို ဆက်လက် ကြားနေရဆဲပင် -
"ဒီစာအုပ်ကို ရေးလိုက်တဲ့ တပည့် သူ့ ဘ၀သူ့ အခြေအနေက သူက အသက်လေးဆယ်ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ သူ့ မှာ ကုလို့ မပျောက်နိုင်တော့တဲ့ ရောဂါတစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်နော်၊ အဲဒါကတော့ သေချာတယ်။ ဒီရောဂါ ဘယ်လိုမှ မပျောက်နိုင်တော့ဘူး၊ ဆရာဝန်တွေကလည်း နှစ်အပိုင်းအခြား၊ ခန့် မှန်းပြီးတော့ ဘယ်လောက်အထိအောင်နေရမလဲပြောတယ်။ အခု သူ ဆရာဝန်တွေ ခန့် မှန်းထားတာထက် နှစ်တော် တော်ကျော်သွားပြိး အသက်ရှည်ခဲ့တာနော်"
သည်နေရာအရောက်တွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပိုမို စိတ်ဝင်စားဟန်ပြလာသည်။ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်နေ သော ပုံစံကိုပြင်သည်။ ပိုမိုစူးစူးစိုက်စိုက် နားစွင့်နေပြန်သည်။
"ဆရာဝန်တွေ ခန့် မှန်းထာက လေးငါးနှစ်လောက်ပဲ နေရတော့မယ်။ ခန့် မှန်းတာကိုး။ ဒီစာအုပ်ကို ကြည့်တော့ ခုနှစ်က ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ သူ မကျန်းမမာဖြစ်နေတာက ၁၉၈၁ ခုနှစ်ကတည်းက၊ ကြာပြီ။ ဆရာဝန်တွေဟောတာထက် သူက အသက်ပိုရှည်နေတယ်။ အံ့သြစရာပဲ။ သူက ဘယ်လောက်ထိအောင် ယုံကြည်သလဲဆိုတော့ ဒီအတိုင်းသာ တရားကို ဆက်ပြီး အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင် သူသက်တမ်းစေ့ နေနိုင်လောက်တယ်တဲ့၊ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့ငါတော့ သေတော့မယ်လို့သူ မယုံကြည်ဘူးတဲ့။ သူ့ ဟာသူ အခုနေခဲ့တာနဲ့ ပဲ ဆရာဝန်ပြောတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတာ သူတွေ့ လာပြီပဲ။ သို့ သော်လည်းပဲ ငါမသေတော့ဘူးဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့နေတာလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ ငါမသေနိုင်သေးဘူးလို့ ပဲ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နော်။ တရားကိုလည်း နေ့ တိုင်း အားထုတ်သွားတယ်။ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာ တွေလည်း အကုန်လုံး လုပ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ သေမယ်လို့ တွေးပြီးတော့ စိတ်ညစ်ပြီးတော့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ တရားရေးတွေကို မလုပ်ဘဲနေရင် လည်း ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ သေမှာကို တွေးပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်ကျနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ သေမှာကို တွေးပြီးတော့ အချိန်ရှိတဲ့အခိုက် အဲဒီအချိန်ကို အကောင်းဆုံးအသုံးချသွားလိုက်ပါ။ သူကိုယ်တိုင် အဲဒါ လုပ်တယ်။"
သူလက်ကာပြရင်းမှ "ရပြီ သူငယ်ချင်း၊ ငါသဘောပေါက်ပြီ" ဟု ဆိုလာသည်။ တချိန်လုံး တိတ်ဆိတ် နေသော သူ့ ထံမှ အသံထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်
ကျွန်တော်နေရာမှထ၍ ကက်ဆက်ကို သွားပိတ်လိုက်ရသည်။ ပြီးတော့ ကက်ဆက်ခွေကို ပြန်ယူလာကာ သူ့ ကို ပေးလိုက်သည်။ သူနေရာမှပင်ထ၍ သွားရန် ပြင်ဆင်နေပေပြီ။
"ကျေးဇူးပဲကွာ၊ သူငယ်ချင်း မင်းဆီလာတာ အားဆေးတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရသလိုပဲ၊ ဒီစာအုပ်ကို ငါသေသေချာချာ ဖတ်မယ်။ ဒီတိတ်ခွေကို ငါသေသေချာချာ နားထောင်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီထဲက ဆရာတော် ဟောထားတဲ့လူလို ငါဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်။ လောကမှာ တစ်ခုလုပ်လို့ မရတော့ရင် နောက်ထပ် လုပ်စရာ အများကြီး ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ငါသဘောပေါက်ပြီကွာ"
သူ့ အသံသည် လှိုဏ်သံပါ၍ အားကောင်းနေသည်။ ဟိုစဉ်တစ်ခါတုန်းကတည်းက အသံမျိုးမဟုတ်တော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ စိတ်ကို တည့်လာအောင် အားကောင်းလာအောင် လုပ်ပေးရကျိုးနပ် ပေတော့မည်။ သူ ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ဆက်၍ ထွက်သွားသည်။ သူ့ ခြေလှမ်းများသည် လာတုန်းကလို မဟုတ်တော့၊ အတော်အတန် သွက်လက်သွားပေပြီ။
သည်တိပ်ခွေကို နားထောင်ရင်း တရားနာကြားခဲ့စဉ်က ကျွန်တော် သတိထားမိခဲ့သော စာပိုဒ်လေးတစ် ပိုဒ်ကို ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် သူ့ အိမ်မှာ နားထောင်ရင်းမှ အထပ်ထပ် အခါခါ ဆင်ခြင်နှလုံး သွင်းနိုင်ပါစေဟု ဆုတောင်းနေမိပါတော့သည်။
"I know that I would like to die with full elarity of mind. This feeling is very important."
သေတဲ့အချိန်မှာ မတွေမဝေ၊ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြည့်ပြည့်၀၀ သိနေတဲ့စိတ်နဲ့ သေချင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သေသေချာချာ သိပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။
သေခါနီးမှာ သတိကောင်းကောင်းနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်တာ စိတ်မှာဖြစ်တာကို ရှုသိပြီး သေရတာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို သေခါနီးမှာ သတိကောင်းဖို့ ဆိုတာက မသေခင် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားမှ ဖြစ်နိုင်မယ်။
ဒါကြောင့် အမြဲတမ်း အတတ်နိုင်ဆုံး သတိကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင် သိနိုင်အောင်ကို သိနေတဲ့ အကျင့်ကိုလုပ်ထားရမယ်။ ဒါဟာ မသေခင်မှာ အကောင်းဆုံးနေနည်းဖြစ်ပြီး သေခါနီးမှာ အကောင်းဆုံး သေနည်းဖြစ်ပါတယ်။
သေခါနီးမှာ သတိကို အားကိုးရမယ်။ သတိရှိမှ ခန္ဓာမှာ ဖြစ်ပျက်တာကို သိနိုင်မယ်။ အနတ္တကိုသိရင်းနဲ့သေရတာ ကောင်းတယ်။ အတ္တစွဲနဲ့ သေရတာ ဆင်းရဲတယ်။ အမြဲတမ်း အနတ္တကို ဥာဏ်မှာ မြင်နေအောင် နှလုံးသွင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိအောင် ကြိုးစားပါ။
(စာရေးသူ - မြသန်းစံ)
credit to dhamma web.
ဒိုင်နိုဆောများကြောင့် မြေကြီးမှ ရွှေသီးတော့မည့် ဖိုးကံကောင်း လယ်သမားကြီး
သတင်းများက အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မွန်တာနားရှိ လယ်သမားကြီး တစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော မွေးမြူရေးခြံတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိသော ဒိုင်နိုဆော အရိုးများကြောင့် ခြံပိုင်ရှင် လယ်သမားကြီး အနေဖြင့် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ် ရေးသားလျှက် ရှိသည်။
အမေရိကန်မှ လယ်သမား တစ်ဦးသည် ရှေးနှစ်သန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာက ရှင်သန်ခဲ့သည့် ဒိုင်နိုဆော သတ္တဝါကြီးများကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ မြေကြီးမှ ရွှေသီးမည့် ကံဇာတာမျိုး ပိုင်ဆိုင်လာပြီ ဖြစ်သည်။ သတင်းများက အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မွန်တာနားရှိ လယ်သမားကြီး တစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သော မွေးမြူရေးခြံတွင် တူးဖော်တွေ့ရှိသော ဒိုင်နိုဆော အရိုးများကြောင့် ခြံပိုင်ရှင် လယ်သမားကြီး အနေဖြင့် သန်းကြွယ်သူဌေး ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သုံးသပ် ရေးသားလျှက် ရှိသည်။ ၎င်း၏ ခြံထဲတွင် T-Rex ဒိုင်နိုဆောကြီး တစ်ကောင်၏ အရိုးစုနှင့် Triceratops တစ်ကောင်၏ အရိုးစု ရုပ်ကြွင်းများကို မတော်တဆ တူးဖော် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းတို့ကို လေလံတင် ရောင်းချရန် စီစဉ်နေပြီ ဖြစ်သည်။
T-Rex၏ အရိုးစုသည် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရှိ အရိုးအားလုံး၏ (၄၀)ရာခိုင်နှုန်းမျှ ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိသမျှ T-Rex ရုပ်ကြွင်းအားလုံးအနက် အပြီးပြည့်စုံဆုံး ထိပ်တန်းအခု(၂၀) စာရင်းတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိသည်။ ဟဲလ်ခရိခ်ရှိ ခြံမြေတွင် တွေ့ရှိသော အရိုးစု ရုပ်ကြွင်းနှစ်ခုကို နိုဝင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် လေလံတင် ရောင်းချသွားမည် ဖြစ်သည်။ သက်တမ်း နှစ်ပေါင်းသန်း(၄၀)မျှ ရှိနေပြီဖြစ်သည့် အရိုးစု နှစ်ခုတွင် T-Rex၏ ရုပ်ကြွင်းက စတာလင်ပေါင် (၁.၄)သန်း၊ Triceratops၏ ရုပ်ကြွင်းက စတာလင်ပေါင် (၅)သိန်းခွဲမျှထိ ရရှိမည်ဟု ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။
T-Rex၏ အရိုးစုသည် (၃၈)ပေ ရှည်လျားပြီး ၎င်းနှင့် မိုင်အနည်းငယ် အကွာတွင် (၂၆)ပေ ရှည်လျားပြီး ကြံ့နှင့် သဏ္ဍန်တူသည့် Triceratopsကို တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု T-Rex၏ ရုပ်ကြွင်းတွင် အခြားတွေ့ရှိထားသည့် မပြည့်စုံသော T-Rex အရိုးစုများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြည့်တင်းပေးထားသည်။ Triceratopsကမူ ပိုမိုပြည့်စုံပြီး ယင်းအသီးအရွက်စား ဒိုင်နိုဆော၏ ကြီးမားသော ဦးချိုနှစ်ခု၊ နှာခေါင်းထိပ်မှ ချိုငယ်တစ်ခု အပါအဝင် အရိုးစ အားလုံး၏ (၇၀)ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်စုံစွာ ရှိနေသည်။ သတင်းများက အမည်ဖော်မပြသည့် လယ်သမားကြီးသည် T-Rex အရိုးစုကို ရက်ဆဲလ်ဟု အမည်ပေးထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမေရိကန် ပန်းချီဆရာ ချားလ်စ်ရက်ဆဲလ်သည် T-Rex အရိုးစု တွေ့ရှိရာ နေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်းရှိ လယ်တဲလေးတွင် ရှုမျှော်ခင်းပုံ ပန်းချီများ လာရောက်ရေးဆွဲဖူး၍ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အချိန်ထိ ဒိုင်နိုဆော အရိုးစု တစ်ခုအတွက် စံချိန်တင် ရရှိဖူးသော ဈေးနှုန်းမှာ (၁၉၉၇)ခုနှစ်က ရောင်းချခဲ့သည့် ဆူးအမည်ရှိ T-Rex အရိုးစု ဖြစ်သည်။ အလွန်ပြည့်စုံ လှပသော ရုပ်ကြွင်းကို ဒေါ်လာ (၅.၇)သန်းထိ ဈေးပေးဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒါကိုတာ တောင်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိသော အဆိုပါ အရိုးစုကြီးသည် ပေ(၄၀)ရှည်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် တူးဖော်တွေ့ရှိဖူးသမျှ အရိုးပိုင်း အပြည့်စုံဆုံး ရုပ်ကြွင်းအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ T-Rex အရိုးစုကြီး ဆူးကို ယခုအခါ ချီကာဂိုရှိ သဘာဝ သမိုင်းပြတိုက်တွင် ပြသထားသည်။
From: Planet Myanmar Network
ငွေနှင့်ကျော်ကြားမှုအတွက် သတင်းမှားရေးခဲ့ရသည်ဟုအထိန်းသိမ်းခံ တရုတ်သတင်းထောက်က ၀န်ခံချက်ပေး
တရုတ်အာဏာပိုင်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံနေရသော တရုတ်သတင်းထောက်က အစိုးရမှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပိုင်ဆိုင် ထားသော Zoomlion လုပ်ငန်းစုအပေါ် သူ၏ ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးများသည် ငွေနှင့်ကျော်ကြားမှု အ တွက် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ ရေးသားမိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံမှတစ်ဆင့် ၀န်ခံစကား ဆိုခဲ့သည်။ ချန်ယန် ကျိုး၏ ဝေဖန်ရေး ဆောင်းပါးများကို ပုံမှန်ဖော်ပြပေးခဲ့သော News Express သတင်းစာက ကနဦးပိုင်း တွင် ချန်ဘက်မှ ရပ်တည်ကာ အာဏာပိုင်များကို တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန် တွင် မည်သည့် ထင်မြင်ချက်မှ မပေးဘဲ နှုတ်ပိတ်လျှက် ရှိနေသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၆ရက် ယမန်နေ့က စီစီတီဗီတွင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ချန်သည် အစိမ်းရောင် အကျဉ်းသား ၀တ်စုံ ၀တ်ထားပြီး ကင်မရာကို စိုက်ကြည့်ကာ သူပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့သော Zoomlion အတွက် နစ်နာမှုများအပေါ် ရိုးဖြောင့်စွာ တောင်းပန်းစကား ဆိုသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ တောင်းပန် စကားတွင် Zoomlion မှ ရှယ်ယာရှင်များကို လည်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေနှင့် ကျော်ကြားမှုကို မက်မောကာ အမှားလုပ်မိကြောင်း၊ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ကိုလည်း ချိုးဖောက် မိကြောင်း၊ ယခုအခါ သူ၏ မှားယွင်းသည့် လုပ်ရပ်အတွက် ဆုံးရှုံးများစွာ တန်ပြန် ခံစားနေရကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုမျှမက ယခု လုပ်ရပ်မျိုးကို ကျူးလွန်မိသည်မှာ မျက်မှောက်ခေတ် ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လောက တွင် သူတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သတင်းလောက တစ်ရပ်လုံးအတွက် သင်ခန်းစာ ယူဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
ချန်သည် နိုင်ငံမှ ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ပိုင်ဆိုင်ထားသော Zoomlion လုပ်ငန်းစု၏ ငွေကြေးပြဿနာများနှင့် အမြတ်ငွေလိမ်ညာ ဖော်ပြမှုများကို ရေးသားရာတွင် လာဘ်ထိုးသူထံမှ ရခဲ့သော သတင်းရင်းမြစ် ၁၀% ပေါ် အခြေ ခံ ကာ လုပ်ဇာတ်များ ရေးသားခဲ့သည်ဟု ဆင်ဟွာ သတင်းဌာနက ဆိုသည်။ ချန်ကို ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၂၃ရက်တွင် News Express သတင်းစာ၏ မျက်နှာဖုံးတွင် တို့လူ ကိုပြန် လွှတ်ပေး ဟူသော ခေါင်းစဉ်မျိုးဖြင့် ချန်ဘက်မှ ကာကွယ် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်မှ နိုင်ငံပိုင် မ ဟုတ်သော မီဒီယာများကလည်း ချန်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အပေါ် အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ရဲသည် အာဏာ ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ကြသည်ဟု ပင် ဆိုခဲ့ကြသည်။
From: The Myanma Age
စနိုးဒင်၏ ဖော်ကောင်လုပ်မှုက အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်
တစ်ချိန်က စီအိုင်အေတွင် လက်ထောက် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ မိုက်ကယ်မော်ရဲက စနိုးဒင်၏ ဖော်ကောင်လုပ်မှု များသည် အမေရိကန် ရန်သူများကို ကူညီရာရောက်နေပြီး နိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ထိပ်တန်းလျှို့ ၀ှက်ချက်များ ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ စီဘီအက်စ်တွင် ပုံမှန် တင်ဆက်နေကြဖြစ်သော မိနစ်၆၀ ဟု အမည်ရ အင်တာဗျူး အစီအစဉ်တွင် မိုက်ကယ်က စနိုးဒင်ကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စီအိုင်အေတွင် ၃၃နှစ်ကြာ အမှုထမ်းခဲ့သော မိုက်ကယ်က ယခုလုပ်ရပ်များကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားသည် သူတို့၏ အားနည်းချက်များကို သတိပြုမိလာပြီး ပစ်မှတ်များ၏ ဟာကွက်များကိုလည်း ပိုမိုတွေ့ရှိသွားကြမည်ဟု ဆိုသည်။ နိုင်ငံအများအပြားက NSA ကို စပိုင်လုပ်သည့် လုပ်ရပ်ကြီး ပေါ်လာထွက်ပြီး အချက်အလက်များ ခိုးယူစုဆောင်းနေသည့် စပိုင်လုပ်ရပ်ကို ကြောက်လန့်ကြသည်။ သို့သော် NSA အတွက် တကယ်တန်း ထိခိုက်စေသည့် အချက်မှာ စပိုင်လုပ်ရပ်များထက် ထိုအတွက် သုံးစွဲသည့် ဘတ်ဂျက်ကို လူသိရှင်ကြား ပေါ်လွင်သွားသည့် ကိစ္စမှာ ပို၍ အလေးထား သည်ဟု သူက မှတ်ချက်ပေးသည်။
ထို့အတွက် စနိုးဒင်ကိုယ်တိုင်က အချက်ပေးခရာမှုတ်သူ အဖြစ် တင်စားနေချိန်တွင် မိုက်ကယ်မော်ရဲကမူ တိုင်းပြည်၏ သစ္စာဖောက်ဟု ဆိုလိုက်သည်။
စီဘီအက်စ်နှင့် မိုက်ကယ်မော်ရဲတို့၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပြည့်အစုံကို ယင်းရုပ်သံလိုင်းတွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်တွင် အပြည့်အစုံ ထုတ်လွှင့် ပြသမည် ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်က အရိုက်ခံရသည့် ကလေးများ သာမန်ထက် ရန်လိုလေ့ရှိ
အသက်(၅)နှစ်မျှထိ မိဘ၏ အရိုက်အနှက်ကို ခံလာရသော ကလေးများသည် မူလတန်းအရွယ်တွင် စာသင်ကျောင်း၏ စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသလို သာမန်ထက်လည်း အတန်ငယ် ရန်လို ဒေါသထွက်တတ်ကြောင်း သုတေသန တွေ့ရှိချက်များက ဖော်ပြထား
ငယ်စဉ်က မိဘများ၏ အရိုက်အနှက်ကို ခံရလေ့ရှိသည့် ကလေးများသည် အတန်ငယ် အသက်ကြီး လာချိန်တွင် သာမန်ထက် ရန်လိုလေ့ရှိကြောင်း သုတေသီများက ပြောကြားလိုက်သည်။ အသက်(၅)နှစ် မျှထိ မိဘ၏ အရိုက်အနှက်ကို ခံလာရသော ကလေးများသည် မူလတန်းအရွယ်တွင် စာသင်ကျောင်း၏ စည်းမျဉ်း များကို ချိုးဖောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများသလို သာမန်ထက်လည်း အတန်ငယ် ရန်လို ဒေါသထွက် တတ်ကြောင်း သုတေသန တွေ့ရှိချက်များက ဖော်ပြထားသည်။ သုတေသီများက ကလေးများကို ရိုက်နှက် ဆုံးမခြင်း ထက် အချိန်ယူကာ မိမိလိုလားသည့် အနေအထားကို ညှိနှိုင်းသင်ပြပေးရန် မိဘများကို တိုက်တွန်း ခဲ့သည်။ တိကျစွာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အထောက်အထား မပြနိုင်သည့်တိုင် အခြေခံ အကျဆုံး ယူဆ ချက် တစ်ခုအဖြစ် ကလေးများကို ရိုက်ခြင်းက ၎င်းတို့ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမှားအယွင်း ဖြစ်စေနိုင် သည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ကြောင်း ဦးဆောင် သုတေသီ မိုက်ကယ် မက်ကန်ဇီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယော့ခ်ရှိ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများသည် (၁၉၉၈)ခုနှစ်မှ (၂၀၀၀)ပြည့်နှစ်ကြား မွေးဖွားခဲ့သည့် အမေရိကန် ကလေးငယ် (၁၉၀၀)၏ အမူအကျင့် မှတ်တမ်းများကို လေ့လာ ခဲ့ကြသည်။ ယင်းတို့သည် အမေရိကန်ရှိ မြို့ပေါင်း(၂၀)တွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်သည့် ကလေးများ ဖြစ်ကြ သည်။ ကလေးငယ်များ (၃)နှစ်မှ (၅)နှစ်အရွယ်အတွင်း မိဘများက ဆုံးမခဲ့သည့် ပုံစံနှင့် ကျောင်းနေစ အရွယ်တွင် ၎င်းတို့ ပြုမူကျင့်ကြံပုံများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခဲ့သည့်နောက် ငယ်စဉ်က အရိုက်ခံ ရသည့် ကလေးများသည် အတန်ငယ် ပိုမို၍ ရန်လိုပြီး စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုများလည်း ရှိတတ်ကြောင်း ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသက်(၉)နှစ်အရွယ်တွင် ကလေးများ အနေဖြင့် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ စမ်းသပ်ချက်များကို ပြုလုပ်တိုင်း ငယ်စဉ်က မိဘများ ရိုက်နှက် ဆုံးမထားသည့် ကလေးများက ပိုမို၍ အားနည်းတတ်ကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ မက်ကန်ဇီက ဆိုသည်။ "တိကျတဲ့ ဆက်စပ်မှုကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ထုတ်မပြနိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မိဘတွေက ကလေးတွေ ငယ်စဉ်မှာ ရိုက်နှက် ဆုံးမခဲ့တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုမှာ သာမန်ထက် နည်းနည်း ဘေးချော်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (၉)နှစ် အရွယ်လောက်မှာ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေအရ ငယ်ငယ်တုန်းက အရိုက်ခံခဲ့တဲ့ ကလေးတွေဟာ သာမန်ကလေးတွေ အမှတ်(၁၀၀)ရမယ့် မေးခွန်းမျိုးတွေအတွက် (၉၃)မှတ်လောက်ပဲ ရခဲ့ကြပါတယ်"ဟုလည်း ၎င်းက ရှင်းပြခဲ့သည်။ မက်ကန်ဇီက "တကယ်လို့ ကလေးတစ်ယောက်က တခြားကလေးတစ်ယောက်ဆီက အရုပ်ကို လိုချင်တယ် ဆိုပါစို့။ မိဘတွေက သူတို့ကို ဘယ်လိုနားလည်အောင် ရှင်းပြမလဲ။ ဘယ်လို သွန်သင်မလဲ ဆိုတာက အရေးကြီးလာပါတယ်။ တကယ်တော့ ရိုက်နှက် ဆုံးမတဲ့ နည်းလမ်းက မလွှဲမရှောင်သာလွန်းမှ သုံးသင့်တယ်"ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။
From: planet Myanmar
အမျိုးသားပရိသတ် အကြိုက်တွေ့မည့် ဟယ်လန်ဖလာနာဂန်၏ ပြက္ခဒိန်သစ်
Fizzy Daysစတား ဗြိတိသျှ မော်ဒယ်လ် မင်းသမီးသည် (၂၀၁၄)ခုနှစ်အတွက် ညှို့ချက်ပြင်းပြင်း ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်သည့် ပြက္ခဒိန်အသစ်ကို စတင် ထုတ်ဝေလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်
ဟယ်လန် ဖလာနာဂန်၏ ပြက္ခဒိန်အသစ်သည် သူမကို နှစ်သက် အားပေးသည့် အမျိုးသား ပရိသတ်များ အတွက် ပေးရသည့် ငွေကြေးနှင့် လုံးဝ ထိုက်တန်စေကြောင်း ဟောလီးဝုဒ် သတင်းဌာနများက ဖော်ပြ ခဲ့ကြသည်။ Fizzy Daysစတား ဗြိတိသျှ မော်ဒယ်လ် မင်းသမီးသည် (၂၀၁၄)ခုနှစ်အတွက် ညှို့ချက်ပြင်းပြင်း ဓာတ်ပုံများ ပါဝင်သည့် ပြက္ခဒိန်အသစ်ကို စတင် ထုတ်ဝေလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ဟယ်လန် သည် ဆွဲဆောင်မှု ပြင်းပြသည့် အတွင်းခံ အဝတ်အထည်များနှင့် ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့သလို ယင်းထက် ပို၍ ရင်သိမ့်တုန် ဖြစ်စေမည့် ရိုက်ချက်များပါ ပါဝင်ကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ အသက်(၂၃)နှစ်ရှိ ဟယ်လန် သည် ယခုနှစ် အစောပိုင်းက FHM မဂ္ဂဇင်း၏ ပရိသတ်များ မဲပေးမှုအရ (၂၀၁၂)ခုနှစ်၏ ညှို့အားအပြင်း ဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။
ဟယ်လန်သည် ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်ရပ်ဝန်းတွင် အထင်ကရ ကြယ်တစ်ပွင့် ဖြစ်မလာသေးသော်လည်း ယင်းအတွက် အထူးတလည် အာရုံစိုက် ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ Daily Mirrorက ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်များအတွင်း ဟယ်လန်သည် လော့စ်အန်ဂျလိစ်တွင် သရုပ်ဆောင်နှင့် မော်ဒယ်လ် အေဂျင်စီ အချို့တို့၌ မွမ်းမံသင်တန်းများ တ်က်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အမျိုးသားကြိုက် FHM မဂ္ဂဇင်းက ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရင်သားအလှဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် ဟယ်လန်ကို ရွေးချယ် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ဟောလီးဝုဒ် အတင်းအဖျင်း သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များက ဟယ်လန်၏ ပြက္ခဒိန်သည် အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး ခရစ္စမတ်လက်ဆောင် ဖြစ်လာမည်ဟုလည်း ရေးသားခဲ့ကြသည်။
နေပြည်တော်၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေးအတွင်းရှိ ဧရာဝတီဘဏ်၌ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို မီးငြှိမ်းသတ်ပြီးနောက် တွေ့ရစဉ်
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ည ၈ နာရီ ၄၀ ခန့်က နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ဘောဂသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့် ဈေးအတွင်းရှိ အကွက်အမှတ် (၁၁၁ ) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဧရာဝတီဘဏ်၌ မီး လောင်ကျွမ်းမှု တစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မီးလောင်ကျွမ်းမှုမှာ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ည ၈ နာရီ ၄၀ ခန့်က ဘဏ်ဆိုင်းဘုတ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အလှမီးလုံးများ အပူရှိန်လွန်ကဲရာမှ စတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ည ၉ နာရီ ၅ မိနစ်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နေပြည်တော် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “မီးလောင်ကျွမ်းရတာက ဘဏ်ဆိုင်းဘုတ်မှာ ထွန်းထားတဲ့ မီးလုံးတွေ အပူလွန်ကဲပြီး လောင်ကျွမ်းခဲ့တာပါ။ တခြားနေရာတွေတော့ မလောင်ကျွမ်း ခဲ့ပါဘူး”ဟု အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲကပြောကြားသည်။
ယင်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုနေရာသို့ နေပြည်တော်မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ မီးသတ်ယာဉ် ၂၆ စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် ၁ စီးနှင့် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃၉ ဦးရောက်ရှိ ငြိမ်းသတ်ခဲ့ကြ ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဘဏ်ဆိုင်းဘုတ်မှာ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးမှာ ကျပ်သိန်း ၃၀ ခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အမှတ် (၁) မြို့မ ရဲစခန်း မှူး ရဲမှူးညီညီဝင်းက “ဆိုင်းဘုတ်ကိုပဲ မီးလောင်ကျွမ်း သွားခဲ့ တာပါ။ အခြားငွေကြေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဘာတစ်ခုမှ လောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးမှု မရှိခဲ့ပါဘူး”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
အဆို ပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် ဘဏ်လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူအား ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အမှတ်(၁) မြို့မရဲစခန်းမှ (ပ) ၁၁၀/၂၀၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဘွိုင်လာအပူချိန်လွန်ကဲရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇
၂၇.၁၀.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၀၇၀၀အချိန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းနှင့် ကုန်းဘောင် လမ်းထောင့် ရှိ ရွှေနဂါးကုမ္ပဏီ စားကောင်းကိတ်မုန့်စက်ရုံတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ် ဦးစီးမှူးနှင့် အဖွဲ့ တို့မှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၃)စီး၊ မီးသတ်ယာဉ် (၂၀)စီးတို့ဖြင့် ရောက်ရှိမီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ ၀၇၂၅အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာ မုန့်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ဘွိုင်လာအိုး အပူချိန် လွန်ကဲပြီး ဆီများလျှံ ကျကာ မီးလောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ စက်ရုံအတွင်းရှိဆီပေပါ (၂)လုံးနှင့် မော်တာ (၂)လုံးတို့အား
မီးစွဲလောင်ကျွမ်းခဲ့ကာ တန်းဘိုးငွေကျပ်(၄၀၀၀၀၀)ခန့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး မီးကိုပေါ့ဆစွာအသုံးပြုသူ ဘွိုင်လာတာဝန်ခံ မင်းအောင်(ဘ)ဦးထူးအယ်၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် နေသူအား လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၂၄၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက် လျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ ကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြလျှင် ထောင်ချမည့် ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေကြမ်း ကန့်ကွက်ခံရ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ ကိုင်ဆောင် ဆန္ဒပြလျှင် ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်မည့် ၁၉၅၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် အထိမ်းအမှတ်များ (ဆင်ယင်ပြသမှု ကန့်သတ်ရေး) ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချက် ရယူရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ကန့်ကွက်သဖြင့် အတည်မပြု နိုင်သေးကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေပုဒ်မ (၄) တွင် ပါရှိသည့် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ၏ပုံကို ရုံးဌာနများနှင့် နေအိမ်များတွင် အလေးအမြတ်ထား၍ ချိတ်ဆွဲဆင်ယင် ထားရှိခြင်း ဆိုသည့်အချက်ကို ကန့်ကွက်သဖြင့် အဆိုပါ ဥပဒေကို ထပ်မံဆွေးနွေးရန်အတွက်
အတည်ပြုမည့် ရက်ကို အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ် သို့ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ (၄) ပါ ဖြည့်စွက်ချက်များသည် ဖြည့်စွက်ရန် မလိုကြောင်းနှင့် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် တည်ဆဲ ဥပဒေများကိုသာ အများပြည်သူတို့က လိုက်နာရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျောက်ဖြူ မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ကန့်ကွက် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး၏ ရုပ်ပုံကို ကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒပြခြင်းနှင့် အခြားသော အသုံးမပြုသင့်သည့်နေရာ ဌာနများတွင် သုံးစွဲပါက ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ငွေကျပ်ငါးသောင်း ချမှတ်နိုင်ပြီး ပြစ်ဒဏ် နှစ်ရပ်စလုံးလည်း ချမှတ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်း ရေးသားထားသည်။
နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီသတင်း လုပ်ကြံရေးသားမှု တရုတ်သတင်းထောက် ၀န်ခံ
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတခုက ငွေကြေး အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို လုပ်ကြံ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဟာ ငွေရလို့ဖြစ်တယ်လို့ တရုတ် စီးပွားရေးသတင်းထောက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂွမ်ဂျိုးမြို့အခြေစိုက် New Express သတင်းစာတိုက်က သတင်းထောက် ချန်ယန်ဂျို့ကို လုပ်ငန်းရဲ့ နာမည် ပျက်စေမှု နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်မှာ ဖမ်းဆီး ခဲ့ပါတယ်။ Zoomlion ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ က အမြတ်ပိုရအောင် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေကို ချန်ယန်ဂျို့က ဆက်တိုက် ရေးသားခဲ့ တာပါ၊ အဲဒီကုမ္ပဏီကို ယူနန်ပြည်နယ်အစိုးရက ၆ ပုံ ၁ ပုံ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
စနေနေ့ကတော့ တရုတ်အစိုးရပိုင် CCTV ပေါ်မှာ ချန်က ဒီလိုရေးသားခဲ့တာဟာ လောဘကြောင့်ဖြစ် တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖမ်းခံထားရတဲ့ သတင်းထောက် ချန်က သူ့အမှုအတွက် တရားရုံး မထုတ်ခင် ခုလို ရုပ်မြင်သံကြားပေါ် မှာ ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အပေါ် တရားရေးရာကျွမ်းကျင်သူတချို့ကတော့ စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်လုိ့ ပြောနေကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် တော်ပီဒိုနှင့် HONGQI-16 လေကြောင်းရန်...
အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် အချစ်က (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း အရေ...
ပေါင်သန်း၄၀နှင့် ဈေးဖွင့်မည့် ပန်းနုရောင်ကြယ်ပွင...
ဗိဿနိုး၊ သရေ ခေတ္တရာ ပျူမြို့ ဟောင်းများကို ကမ္ဘာ့ အ...
ဖခင်၏ မီးရှို့သတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည့် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်...
သုဝဏ္ဏ အားကစားဝင်းအတွင်း အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပိုးသတ်ဆေ...
ဒိုင်နိုဆောများကြောင့် မြေကြီးမှ ရွှေသီးတော့မည့် ဖိ...
စနိုးဒင်၏ ဖော်ကောင်လုပ်မှုက အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အဆု...
အမျိုးသားပရိသတ် အကြိုက်တွေ့မည့် ဟယ်လန်ဖလာနာဂန်၏ ပြ...
နေပြည်တော်၊ သီရိရတနာအဆင့်မြင့်ဈေးအတွင်းရှိ ဧရာဝတီ...
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဘွိုင်လာအပူချိန်လွန်ကဲရာမှ မ...
ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ ကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြလျှင် ထောင်ချမည့်...
နိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီသတင်း လုပ်ကြံရေးသားမှု တရုတ်သတင်း...